ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ & Diagnostic ဖုန်းများအတွက်, ဓာတ်ခွဲခန်းဖုန်းများအတွက်, သွားဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ - SINOLAND
ပြုတ်ရည်သတ်မှတ်ပေးသည် & သွေးသွင်းသတ်မှတ်ပေးသည်
ဆေးထိုးပိုက် & Hypodermic အပ်
Urology & ခွဲစိတ်ကုသ
Hemodialysis ပြွန်နှင့် Kit
ဆေးထိုးအပ်အခမဲ့ connector ကို
ဓာတ်ခွဲခန်း Diagnostic ထုတ်ကုန်များ
4.5-9.0ph0-14ph1-14ph စက္ကူဆီးက Universal PH ကိုစမ်းသပ်ခြင်းမြှောင်
10ul 200ul 1000ul 1ml 5ml 10ml မြုံ gilson ဓာတ်ခွဲခန်းတစ်ခါသုံးအပြာအဝါရောင်အဖြူရောင်အဖြူရောင်ပလပ်စတစ်အသေးစား pippette pipette အကြံပေးချက်များ
30ml40ml60ml ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဆင့် PP ဆေးပညာဖလား
တစ်ခါသုံး 20ml 50ml 100ml ပလတ်စတစ် centrifugal Tube ဘွဲ့ရ
အေးခဲနေသော Tube (Cyro ပြွန်)
high sensitivity လွယ်ကူမူလစာမျက်နှာအသုံးပြုမှု HBSAg HPAb FOB HCV ကူးစက်ရောဂါ Rapid စမ်းသပ်
မူလစာမျက်နှာစမ်းသပ်ခြင်း hCG Rapid Test ကိုဆီး hCG ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ် Kit
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Diagnostic Rapid စမ်းသပ်ပစ္စည်းများတစ်ခုမှာအဆင့် LH မျိုးဥထွက်စမ်းသပ်ခြင်း
မြုံ 1ul 10ul Inoculation Loop
ဆီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း Rapid စမ်းသပ်ခြင်း Kit URS-10T 11MA 12MA စမ်းသပ်ခြင်း
30G 32G 4MM 13MM Mesotherapy တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်
Filler သည်တုံးတိတိသိကောင်းစရာ Micro နဲ့ Cannula အပ်
မျက်စိ Gel Patch
Hyalauronic အက်ဆစ် Derma Filler
nano Derma ကလောင်တစ်ခါသုံးဆေးထိုးအပ်
PDO Thread ဓာတ်လှေကား
အံသွား Whiten Gel ဆေးထိုးအပ်
အံသွား Whiten ကလောင်
အံသွား Whiten မြှောင်
တုံးကော် despensing အပ်
CBD OIL မျက်မှန်ပြွတ်
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ Frost Glass ကို Bottle သ
1. Minimize outing activities (1) Avoid going to areas where diseases are endemic. (2) It is recommended to reduce visiting relatives and friends and gatherings during the Spring Festival, and try to rest ...ပိုမိုဖတျရှု
On February 2, 2020, the Emergency Management Office of Qingdao Municipal Hospital heldapneumonia epidemic prevention and control work meeting withanew type of coronavirus infection. After the meeting, the current...ပိုမိုဖတျရှု
Qingdao Sinoland heldagroup building event on the coming of Thanksgiving in 2019. In this event, everyone’s gratitude was inspired. In the years to come, we will always be grateful and createacaring collecti...ပိုမိုဖတျရှု
Intercellular communication occurs through many different mechanisms. Some of these mechanisms are well known: in animals, for example, predatory threats can drive the release of norepinephrine,ahormone that trigger...ပိုမိုဖတျရှု
As we all know, medical device packaging as the last barrier to protect medical devices, its importance is self-evident. It is necessary to sterilize it before it leaves the factory completely, so that it can maintain...ပိုမိုဖတျရှု
ROOM တွင် A2707, Sunshine ရုပ်ရှင်မျှော်စင် No.61 ဟောင်ကောင်အလယျပိုငျးလမ်း, Shinan ခရိုင် Qingdao, တရုတ် 266071
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-18660230908
E-mail ကို: sinolandtrade@139.com
လိပ်ပြာ IV အပ်, CBD OIL မျက်မှန်ပြွတ်, ဆေးထိုးအပ်နှင့်အတူအပ် , Accurate Ph Test Strips, ဆေးထိုးအပ်အပ်စက်, Pdo Thread ကြွ , အားလုံးထုတ်ကုန်များ